Qoor-qoor oo Farmaajo ku ag qaday una qaraab tegay Imaaraad | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qoor-qoor oo Farmaajo ku ag qaday una qaraab tegay Imaaraad
Qoor-qoor oo Farmaajo ku ag qaday una qaraab tegay Imaaraad
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Qoor Qoor kula kulmay hotel kuyaala magaalada Nairobi saraakiil katirsan dowladda Imaaraadka Carabta uu hogaaminayay Xuseen Darwiish Al-Shamsi oo ah Madaxa Mukhaabaraadka Imaaraadka u qaabilsan Geeska Afrika.
Sida aan wararka ku helnay Madaxweynaha Galmudug oo raadinayay xiriirka dowladda Imaaraadka Carabta ayaa kala hadlay saraakiishan sida uu xiriir u dhax mari lahaa labada dhinaca loogana taageeri lahaa Galmudug arrimo badan oo muhiim u ah xiligan.
Qoor Qoor ayaa dowladda Imaaraadka Carabta ka codsaday iney gacan ka siiso dhismaha dekadda Hobyo oo horey ay u ballan qaaday in ay dhiseyso dowladda Qadar balse ka gaabisay, waxa uu sidoo kale ka codsaday in dhanka ciidanka ka taageerto.
Kulankan qarsoodiga ah ee Madaxweynaha Galmudug iyo saraakiisha Imaaradaka dhax maray ayaa abuuray shaki badan, lamana oga sida dowladda federaalka oo xiriirka u jartay Imaaraadka uga falcelin doonto talaabadan uu qaaday Madaxweyne Qoor Qoor.
Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa xiriir toos ah la leh dowladda Imaaraadka Carabta halka maamulada kale ee taageera dowladda federaalka aysan wax xiriir ah la laheyn dowladaasi .
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa la filayaa inuu maanta dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho si uu uga qeyb galo shirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo la filayo inuu maanta ka furmo Muqdisho.
Previous articleSarkaal ka tirsan dowladda Brazil oo lagu dilay fallaar xilli uu ku sugnaa keynta Amazon
Next articleWar deg deg ah Xamadi Maxmed Farax oo xalay in la Kufsday Dabaqa Lixaad laga sii Tuuray magaalada Muqdiaho
Madaxweyne Laftagreen oo u balan qaaday Xildhibaan Boorow oo shabaab...